Pictures: Orlando City Soccer ties Inter Miami - Orlando Sentinel
Orlando player Tesho Akindele (13) kicks the ball into the goal past Miami goalkeeper Nick Marsman (32) during the Inter Miami at Orlando City Soccer match at Exploria Stadium in Orlando on Wednesday, August 4, 2021. The goal was disallowed after review. The game ended in a 1-1 tie. (Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel) (Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel)
Orlando player Mauricio Pereyra (10) gets tangled up with Miami player Kieran Gibbs (top) during the Inter Miami at Orlando City Soccer match at Exploria Stadium in Orlando on Wednesday, August 4, 2021. The game ended in a 1-1 tie. (Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel) (Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel)
Orlando player Antonio Carlos (25) heads the ball into the goal for Orlando’s only goal of the game during the Inter Miami at Orlando City Soccer match at Exploria Stadium in Orlando on Wednesday, August 4, 2021. The game ended in a 1-1 tie. (Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel) (Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel)
Orlando player Andres Perea (top) yells in celebration after teammate Antonio Carlos (bottom) scored a goal on a header during the Inter Miami at Orlando City Soccer match at Exploria Stadium in Orlando on Wednesday, August 4, 2021. The game ended in a 1-1 tie. (Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel) (Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel)
Miami player Nicolas Figal (5) kicks toward the goal during the Inter Miami at Orlando City Soccer match at Exploria Stadium in Orlando on Wednesday, August 4, 2021. The game ended in a 1-1 tie. (Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel) (Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel)
Miami coach Phil Neville yells during the Inter Miami at Orlando City Soccer match at Exploria Stadium in Orlando on Wednesday, August 4, 2021. The game ended in a 1-1 tie. (Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel) (Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel)
Orlando goalkeeper Mason Stajduhar leaps but cannot stop a Miami goal from scoring during the Inter Miami at Orlando City Soccer match at Exploria Stadium in Orlando on Wednesday, August 4, 2021. The game ended in a 1-1 tie. (Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel) (Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel)
Miami goalkeeper Nick Marsman (left) keeps the ball away from Orlando player Nani (17) during the Inter Miami at Orlando City Soccer match at Exploria Stadium in Orlando on Wednesday, August 4, 2021. The game ended in a 1-1 tie. (Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel) (Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel)
Orlando player Antonio Carlos (top) collides with Miami player Robbie Robinson (bottom) during the Inter Miami at Orlando City Soccer match at Exploria Stadium in Orlando on Wednesday, August 4, 2021. The game ended in a 1-1 tie. (Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel) (Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel)
Miami player Christian Makoun (right) knocks down Orlando player Chris Mueller (9) during the Inter Miami at Orlando City Soccer match at Exploria Stadium in Orlando on Wednesday, August 4, 2021. The game ended in a 1-1 tie. (Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel) (Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel)
Orlando player Sylvester van der Water (top) leaps over Miami player Nicolas Figal (5) during the Inter Miami at Orlando City Soccer match at Exploria Stadium in Orlando on Wednesday, August 4, 2021. The game ended in a 1-1 tie. (Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel) (Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel)
Miami player Kieran Gibbs celebrates after a goal during the Inter Miami at Orlando City Soccer match at Exploria Stadium in Orlando on Wednesday, August 4, 2021. The game ended in a 1-1 tie. (Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel) (Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel)
Orlando player Oriol Rosell controls the ball during the Inter Miami at Orlando City Soccer match at Exploria Stadium in Orlando on Wednesday, August 4, 2021. The game ended in a 1-1 tie. (Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel) (Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel)
Orlando head coach Oscar Pareja throws the ball in during the Inter Miami at Orlando City Soccer match at Exploria Stadium in Orlando on Wednesday, August 4, 2021. The game ended in a 1-1 tie. (Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel) (Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel)